I-Uranus eScorpio: Kubumba Kanjani Ubuntu Bakho Nokuphila - Ukuhambisana
Main Ukuhambisana I-Uranus eScorpio: Kubumba Kanjani Ubuntu Bakho Nokuphila
I-Uranus eScorpio: Kubumba Kanjani Ubuntu Bakho Nokuphila
Labo abazalwa no-Uranus eScorpio bangamandla okushintsha okungakaze kubonwe muntu ngaphambili. Balapha ukuguqula umhlaba ngokoqobo, balahle amasiko amadala nezinkolelo ezingenangqondo, ngenkathi beletha indlela entsha yokuphila, enye yesayensi yanamuhla.
Bahle ekutholeni izimfihlakalo ezisilele nxazonke besebenzisa izindlela ezingajwayelekile. Okubaluleke kakhulu, zizoguqula indlela esizihlanganisa ngayo, ukuthi sibubona kanjani ubudlelwano bezenhlalo nokuphendula kwabantu komunye nomunye.
U-Uranus eScorpio ngamafuphi:
Isitayela: Uyakhathazeka futhi unamasu
Izimfanelo eziphezulu: Enembile, eqotho futhi enothando
Izinselelo: Ekhohlisayo futhi eguquguqukayo kalula
Iseluleko: Suka emcabangweni ongalawula abantu
Osaziwayo: UShakira, uKim Kardashian, uChristina Aquilera, uHeath Ledger, uNatalie Portman.
Ngokwengqondo, bayinzalo kaFreud ehamba eMhlabeni. Ukuziqonda okusha komuntu uqobo kungenzeka ngokuphelele ngesenzo sabo.
I-Uranus Scorpio ingomunye wabantu abazimisele kakhulu futhi abanobungqabavu be-zodiac. Bazolwela imigomo yabo kuze kube sekupheleni, noma yikuphi ukubhekana nobunzima futhi bazonqoba noma yiziphi izinselelo.
Ukuphikelela nokuphikelela ekucabangeni, beza nemibono emihle ebanikeza amathuba amahle, izixazululo zezinkinga, kepha futhi banezinga elithile lobungozi obuthintekayo.
Kungadingeka ukuthi bathathe okweqile okholweni, futhi kwesinye isikhathi, bagcina sebephansi kwesimo ngemuva kokuphoswa, benamanxeba okuzisusa. Kodwa-ke, umoya awupheli futhi awuguquki. Akukho lutho olungathemba ukunciphisa amandla alo anolaka.
indlela yokujabulisa owesifazane wezintombi ngokocansi
Njengoba isibonakaliso se-Scorpio zodiac singumdabu onomdlandla futhi onomdlandla, okokuqala, ithonya lika-Uranus eliza ukuzononga izinto, ziletha umqondo wokuvukela nokuguqula, ungacabanga ukuthi sibhekene nani lapho.
Laba bantu bangabanye balabo abazokwakha ibhuloho eliya esibhakabhakeni, bavule idome lokungazi namasiko esizihuqa ngawo.
Ukuqina kwabo ngokomzwelo kuyashosholozela ngaphakathi, akukaze kuphumele obala, kodwa kufana nentaba-mlilo eyakha umfutho kuze kube yilapho ekugcineni ikhipha bonke lobo budlova obubophekile. Kumele bafunde ukugxila enhlosweni eyodwa eyodwa ukuze bakwazi ukulungisa izinto.
I-Uranus Scorpios izwa isifiso sokulawula, ukulawula isimo, ukuba nezwi lokugcina. Ngenxa yalesi sidingo, bavame ukuzithola besezimweni ezibeka amakhono abo esivivinyweni, izinselelo zimbi kakhulu, izimbangi nazo zinamandla futhi zinolaka.
Ngemibono yabo esekelwa ukuzimisela kwabo okuqinile kanye nesibindi sokumelana nokuvumelana komphakathi okwandayo, ngeke bazithobe emphakathini nakumithethonqubo yawo.
Bazolwa nokulawulwa okukhulu ngabanye futhi bangakhombisi ukungabaza lapho kufanele basebenzise uhlelo lwabo.
Ubudlelwano bezothando buka-Uranus eScorpio abantu babonakala bungalokothi bumelane, ngenxa yokuziphatha kwabo okungalawuleki nokweqile.
Abakwazi ukuzigcina benake isikhathi eside kakhulu noma bazokhathala umlingani ngesimo sabo somfutho. Kusuka kumngane, bangagcina sebethandana ngokushesha okukhulu njengoba bengakulahla ngokuphelele emahoreni ambalwa.
Bangabantu abangalindelekile kakhulu, yize benogqozi ngokweqile futhi uma kufanelekile. Ngeke bahlale bevalelwe ekhejini impilo yabo yonke, futhi uma inkululeko yabo ivinjelwe, yilokho kuphela!
Bayayesaba leyo mizwa emibi ebonakala ebudlelwaneni, umona, umqondo wokuba nezinto, njalonjalo.
Ngakolunye uhlangothi, izinkanuko zabo ezihehayo zocansi zingase zonakalise ubudlelwano babo ngokuphelele ngoba bavame ukuba nehaba, futhi kufanele bakwenze ngasese.
ungayenga kanjani indoda enomdlavuza
Kumlingani ongakwazi ukuthatha lolu hlobo lokuziphatha, futhi ofuna ukuphathwa kahle, kuyinjabulo yokubulala, uphawu olusheshayo lokuthi izinto ngeke zisebenze.
Kodwa-ke, ngalolu thando olukhulu emisebenzini, nangendlela abacabanga ngayo ngokuphelele, ucansi luzoba yinto ejulile futhi ejabulisayo kubo bobabili.
I-Uranus Scorpio inobuhlakani futhi iyakha, futhi bayathanda ukuthola amaphuzu weqiniso enjabulo yomuntu, umkhawulo ophelele ongazizwa uthokozile, i-paroxysm yokwaneliseka.
Ama-Uranus Scorpios azimisele kakhulu futhi afuna ukuvelela uma eseqale iphrojekthi. Ngeke zime kuze kube yilapho sebekuqede ngempumelelo noma bathole ukuthi akunakwenzeka ukuqhubeka.
Ngaphezu kwalokho, uma nje bengadedela izinkathazo zabo kanye nokwesaba okungenangqondo, bangathinta amandla abo abe lula kakhulu, ngamandla amakhulu kunokujwayelekile.
Futhi uma bengabeka ithemba labo kubangani babo, yonke ingcindezi eyengeziwe elenga emahlombe abo ibizonyamalala, ibanikeze inkululeko ethe xaxa yokuziqapha.
Ngoba bafaka umzamo omkhulu kukho konke abakwenzayo, balindele nokuthi abantu babazise ngalokho abakwenzayo. Futhi uma lokho kungenzeki, ngaphezu kwalokho, uma abantu beqala ukubagxeka noma ukubaklolodela, sonke isihogo sizokhululeka.
uma i-capricorn ifuna ukuthi ubuye
Ngeke basheshe bakhohlwe lokhu kuthukwa ngoba babenikele ngakho konke ukujabulisa wonke umuntu, ukuletha ukuboniswa kokuphothulwa okucacile.
Yile ndlela abenza ngayo izinto, noma kungenjalo, bahola imizamo ejwayelekile futhi bayazihlanganisa ukuze benze umphumela omuhle kakhulu. Uma leyo mizamo ingenakwaziswa, umuntu uzophindisela ngesikhathi esifanele, ngesenzo sokuphindisela esheshayo.
U-Uranus eScorpio indoda
Ngale ndoda, lokho ezwa ukuthi yilokho azobe ekwenza, noma ngabe uthini wonke umuntu. Imizwelo yakhe yinto ebaluleke kakhulu lapha, ngaphandle komfutho wakhe wokudala obonakala ungapheli.
U-Uranus akalali futhi uhlale ebuka umhlaba wonke, elinde umzuzu ofanele wokuletha intuthu yempi, iphunga lokungqubuzana, nomlotha wokwehlulwa noma ukunqoba untanta.
Kuzobakhona uguquko lapho abomdabu abathonywe yile planethi behamba eMhlabeni. Kungaba yisayensi noma ngemilingo, uzoletha inkathi entsha.
Kungenzeka kungabi namuhla, kungabi kusasa, futhi kungaze kubonakale kubo bonke, kodwa kuzokwenzeka esikhathini esithile.
I-Uranus eScorpio owesifazane
Owesifazane u-Uranus Scorpio ungumuntu onamandla kakhulu omnika sonke isikhathi lapho enza umsebenzi. Ubhekana noshintsho oluthile olukhulu lapho evivinywa ngaphambi kwenselelo.
Ngezinye izikhathi uzosebenzisa wonke amandla akhe, kepha amandla amakhulu azulazula ngaphakathi kwakhe awazukuqedwa nje kanjalo.
Ungumuntu oqinile futhi ozimisele ongeke alahle noma ngabe kwenzekani. Ukuthi ushona ezama noma cha akusho lutho. Uma ukunqoba kuseduze, uzokuthatha.
Kungaba umqondo omuhle ukuqaphela ukugxila kakhulu kwezinye izinto. Ukuqaphela akukaze kube kuhle, futhi akulungile kowesifazane wase-Uranus Scorpio.
Hlola Ngokuqhubekayo Ukuhamba Kwamaplanethi Esiginali Ngayinye Yezinkanyezi
☽ Ukuhamba kwenyanga ♀︎ Ukuhamba kweVenus ♂︎ Ukuhamba KweMars
♄ Ukuhamba kweSaturn ☿ Ukuhamba kweMercury Trans Ukuhamba kweJupiter
♅ Uranus Transits ♇ Pluto Transits Trans Ukuhamba kweNeptune
Izeluleko Zothando Njalo Owesifazane We-Scorpio Kumelwe Aqaphele
Ukuhambisana kweLeo Man neLibra Woman Yesikhathi Eside
owesilisa we-pisces nowesifazane we-taurus bathanda ukuhambisana
umdlavuza ilanga nenyanga uphawu
i-node esenyakatho e-pisces soulmate
aries yamadoda pisces ukuhambisana kwabesifazane
luyini uphawu lwe-zodiac lwango-Agasti 13
i-virgo male scorpio umshado wesifazane